piston peratra - China Wenzhou Dongyi milina
Tribologically fitaovana mahasoa Gas-fanorenana mafy ho ambany-lanjany molekiolan'ny-gaza piston vava vola aminy, asio tombo-kase ny entona tao amin'ny famatrarana efi-tranon'i reciprocating compressors. Namboarina izy ireo, eo amin'ny lafiny ara-nofo sy ny famolavolana, ny fampiharana tsirairay toe-piainana ao amin'ny refineries, ny indostrian'ny entona voajanahary, ary koa ny Orinasa sy ny orinasa simika. Ny marina ihany koa ny vava vola aminy, mamela vokarina fandidiana azo antoka amin'ny fanompoana ela fiainana amin'ny rivotra orinasa famokarana sy ny faritra maro ...
Tribologically fitaovana mahasoa
Gas-fanorenana mafy ho ambany-lanjany molekiolan'ny-gaza
piston vava vola aminy, asio tombo-kase ny entona tao amin'ny famatrarana efi-tranon'i reciprocating compressors. Namboarina izy ireo, eo amin'ny lafiny ara-nofo sy ny famolavolana, ny fampiharana tsirairay toe-piainana ao amin'ny refineries, ny indostrian'ny entona voajanahary, ary koa ny Orinasa sy ny orinasa simika. Ny marina ihany koa ny vava vola aminy, mamela vokarina fandidiana azo antoka amin'ny fanompoana ela fiainana amin'ny rivotra orinasa famokarana sy ny faritra maro ny dingana injeniera.
Piston vava vola, mitaingina azy ary ny miaramilan'ny vava vola aminy, dia nanamboatra teti-dratsy isan-karazany:
Iray-na ny ampahany segmental mahitsy
fikasana vava vola aminy, ary efa lasa ny tsikombakomba manokana ho an'ny tena miteraka olana sy mitaky ny fampiharana. Izany dia ahitana ihany koa ny fiovam-pony mahomby maro avy lubricated ny tsy voalanjalanja vava lubricated operation.Pressure misy, rehefa hita fa mety ho an'ny fampiharana ny tsindry ambony sy piston / mpitaingina azy tsikombakomba ihany koa ny peratra azo kokoa fampiharana manokana.
Large savaivony piston vava vola aminy, hatramin'ny 47 "(1200mm) dia fanaon'ny vokarina ho fepetra manokana. Ny isan-karazany ny metaly sy ny mpitaingina azy piston ihany koa ny vava vola aminy, vokarina, amin'ny fampiasana voafantina naoty varahina na vy hariana, izay miasa fepetra hibaiko.
Previous: piston & tehina
Manaraka: mitondra akorandriaka
Mitsubishi Piston Ary Pin
Piston Ary Pin
Piston Ary Pin Assembly
Piston Fa Wave125
piston & tehina